1 VaKorinde 7:1-40
7 Zvino pamusoro pezvinhu zvamakanyora, zvakanaka kuti murume arege kubata+ mukadzi; 2 asi, nokuda kwokupararira kwoufeve,+ murume mumwe nomumwe ngaave nomudzimai wake+ uye mukadzi mumwe nomumwe ave nomurume wake. 3 Murume ngaape mudzimai wake zvaanofanira kuwana;+ uye mudzimai ngaaitire murume wake saizvozvowo.+ 4 Mudzimai haana simba pamuviri wake, asi murume wake anaro;+ saizvozvowo, murume haana simba pamuviri wake, asi mudzimai wake anaro.+ 5 Musanyimana,+ asi mubvumirane kwenguva yakatarwa,+ kuti mutsaure nguva yokunyengetera movazve pamwe chete, kuti Satani arege kuramba achikuedzai+ nokuda kwokushaya kwenyu kuzvidzora.+ 6 Zvisinei, ndinotaura izvi ndichiita zvokubvumira,+ kwete zvokurayira.+ 7 Asi ndingada kuti dai vanhu vose vakanga vakaita seni.+ Kunyange zvakadaro, munhu mumwe nomumwe ane chipo+ chake chinobva kuna Mwari, mumwe ane ichi, mumwe ane icho. 8 Zvino kuvanhu vasina kuroora kana kuroorwa+ nechirikadzi, ndinoti zvakanaka kuti varambe vakaita seni.+ 9 Asi kana vasingakwanisi kuzvidzora,+ ngavaroore kana kuroorwa, nokuti zviri nani kuroora kana kuroorwa+ pane kutsva.+ 10 Vanhu vakaroora kana kuroorwa ndinovapa mirayiridzo, kwete ini asi Ishe,+ kuti mudzimai haafaniri kubva kumurume wake;+ 11 asi chokwadi kana akabva, ngaarambe asina kuroorwa kana kuti zvimwe ngaadzokerane nomurume wake; uye murume haafaniri kusiya mudzimai wake. 12 Asi kune vamwe ini ndinoti, chokwadi, ini, kwete Ishe:+ Kana hama chero ipi zvayo iine mudzimai asingatendi, asi iye achida hake kugara nayo, ngairege kumusiya; 13 uye mukadzi ane murume asingatendi, asi murume wacho achida hake kugara naye, ngaarege kusiya murume wake. 14 Nokuti murume asingatendi anotsveneswa nomudzimai wake, uye mudzimai asingatendi anotsveneswa nehama yacho; dai zvisina kudaro, chokwadi vana venyu vaizova vasina kuchena,+ asi zvino ivo vatsvene.+ 15 Asi kana asingatendi akabva,+ ngaabve hake; hama kana hanzvadzi haisi muuranda mumamiriro ezvinhu akadaro, asi Mwari akakudanirai rugare.+ 16 Nokuti, iwe mudzimai, unoziva sei kuti hauzoponesi murume wako?+ Kana kuti, iwe murume, unoziva sei kuti hauzoponesi mudzimai wako?+ 17 Mumwe nomumwe ngaafambe sokupiwa mugove kwaakaitwa naJehovha,+ uye sokudanwa kwaakaitwa naMwari.+ Ndinorayira+ kudaro muungano dzose. 18 Pane munhu chero upi zvake akadanwa akadzingiswa here?+ Ngaarege kuva asina kudzingiswa. Pane munhu chero upi zvake akadanwa asina kudzingiswa here?+ Ngaarege kudzingiswa.+ 19 Kudzingiswa+ hakurevi chinhu, uye kusadzingiswa+ hakurevi chinhu, asi kuchengetwa kwemirayiro yaMwari kunodaro.+ 20 Mumwe nomumwe ngaarambe ari sezvaakanga ari+ paakadanwa.+ 21 Wakadanwa uri muranda here? Ngazvirege kukunetsa;+ asi kana uchigonawo kuva akasununguka, zviri nani kushandisa mukana wacho. 22 Nokuti munhu wose ari munaShe akadanwa ari muranda munhu waShe akasunungurwa;+ saizvozvowo akadanwa ari munhu akasununguka+ muranda+ waKristu. 23 Makatengwa nomutengo;+ regai kuva varanda+ vevanhu. 24 Hama, mumwe nomumwe ngaarambe ari sezvaakanga ari+ paakadanwa, achiramba ari pedyo naMwari. 25 Zvino pamusoro pevanhu vasati vamboroora kana kuroorwa* handina murayiro unobva kunaShe, asi ndinotaura zvandinofunga+ somunhu akanzwirwa ngoni naShe+ kuti ave akatendeka.+ 26 Naizvozvo ndinofunga kuti izvi zvakanaka nokuda kwenhamo yatiinayo, kuti munhu arambe ari sezvaari.+ 27 Wakasunganidzwa nomudzimai here?+ Rega kutsvaka kusunungurwa.+ Wakasunungurwa kumudzimai here? Rega kutsvaka mudzimai. 28 Asi kunyange kana ukaroora kana kuroorwa, unenge usina kutadza.+ Uye kana munhu asati amboroora kana kuroorwa, akaroora kana kuroorwa, munhu iyeye anenge asina kutadza. Zvisinei, vanoita izvozvo vachava nedambudziko munyama yavo.+ Asi ndiri kukudzivirirai. 29 Zvakare, ndinotaura izvi, hama, kuti nguva yasara ipfupi.+ Kubvira zvino vaya vane madzimai ngavave sevasina,+ 30 uyewo vaya vanochema vave sevasingachemi, nevaya vanofara sevasingafari, nevaya vanotenga sevasina, 31 nevaya vari kushandisa nyika+ sevasiri kuishandisa zvizere; nokuti mamiriro ezvinhu enyika ino ari kuchinja.+ 32 Chokwadi, ndinoda kuti musazvidya mwoyo.+ Murume asina kuroora anozvidya mwoyo nezvinhu zvaShe, kuti angafarirwa sei naShe. 33 Asi murume akaroora anozvidya mwoyo+ nezvinhu zvenyika, kuti angafarirwa sei nomudzimai wake,+ 34 uye ane mwoyo miviri. Uyezve, mukadzi asina kuroorwa, uye mhandara, anozvidya mwoyo nezvinhu zvaShe,+ kuti ave mutsvene mumuviri wake nomumafungiro ake. Zvisinei, mukadzi akaroorwa anozvidya mwoyo nezvinhu zvenyika, kuti angafarirwa sei nomurume wake.+ 35 Asi ndiri kutaura izvi kuti mubatsirwe, kwete kuti ndikusungei nechishwe, asi kuti ndikukurudzirei kuita zvakakodzera+ uye zvinoreva kushandira Ishe nguva dzose pasina kudzongonyedzwa.+ 36 Asi kana paine munhu anofunga kuti ari kutadza kuramba asina kuroora kana kuroorwa,+ kana iye ayaruka, izvi zviri izvo zvinofanira kuitika, ngaaite zvaanoda; anenge asingatadzi. Ngavaroore kana kuroorwa.+ 37 Asi kana chero munhu upi zvake achinzwa akagadzikana mumwoyo make, asingamanikidzwi, asi aine simba pane zvaanoda uye asarudza izvi mumwoyo make, kuti arambe asina kuroora kana kuroorwa, achaita zvakanaka.+ 38 Naizvozvo iyewo anoroora kana kuroorwa anoita zvakanaka,+ asi asingaroori kana kuroorwa achaita zviri nani.+ 39 Mudzimai akasungwa munguva yose iyo murume wake anenge ari mupenyu.+ Asi kana murume wake akafa, iye akasununguka kuti aroorwe newaanoda, munaShe chete.+ 40 Asi anofara kwazvo kana akaramba ari sezvaari,+ maererano nokufunga kwangu. Chokwadi ndinofunga kuti neniwo ndine mudzimu waMwari.+
^ 1VaK 7:​25 Kureva, “mhandara, vose vanhurume nevanhukadzi.”